A.lahi – Page 433
puntland: Guddoomiyaha Gobalka nugaal oo ka hadlay xaladdaha gobolka nugaal oo qaybo ka mida lagu arkay ciidammo ka tirsan Alshabab.
16th March 2016 by A.lahi Leave a Comment
Maalmo ka hor ayeey ahayd markii ciidammo ka tirsan ururka Alshabab ay dhanka badda kaga soo tallaabeen deegannada Puntland ayaga oo wata doomo ay kasoo afduubteen xeebaha dalka.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar C/laahi Faraweyne ayaa waxaa uu ka hadlay xaaladaha gobolka nugaal oo ay qaybo ka mida ku sugan yihiin ururka Alshabaab ciidaamo ka tirsan. guddomiyaha gobolka Nugaal Cumar C/laahi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay inay ku wajahan yihiin sidii ay deegannadooda dib gacantooda ugu soo celin lahaayeen ugana sifayn lahaayeen ururkaas.
Mudane Cumar guddoomiyaha gobolka Nugaal waxaa uu yiri “ Annagu Alshabab iyo Daacish ma kala naqaan noomana kala sokeeyaanoo labaduba waa cadow nabad diida waana la dagaalamaynaa oo ciidamada dawladda ayaa ku wajahan haatan , tiradooda iyo inta meelood ee ay ku sugan yihiinna waanu haynaa balse Warbaahinta kama carrabaabayo inta tiradoodu tahay , balse waxa aan idiin xaqiijinayaa inaan gacanta ku dhigi doonno dhammaantood sharcigana horkeeni doonno”.
Wararka qaarkood ayaa waxa ay tiraabayaan in Ciidamadaani ay yihiin kuwo ka tirsan Ururka Daacish oo ay shabaab kasoo goosteen kuna wajahan yihiin dalka yamen.
Ciidamadaan ayaa waxaa ay isugu jiraan Ajaaniib iyo Soomaali waxaana tiro ahaan lagu qiyaasay inay gaaraan 300 nin oo qalabysan oo sita hubka gacanta lagu qaadi karo.
Dawladda puntland ayaa ku eedaysay ciidamadaani inay gacan saar la leeyihiin dawlada federalka ah maadama ay puntland diidday nidaamka hagardamada iyo dhib udhaca xambaarsan ee 4.5.
BY: A/hi Arays
Maraykanka : Donald trump oo guul ka Gaaray Florida
Donald Trump ayaa waxaa uu u tartamayaa inuu noqdo murashaxa Madaxweyne nimo ee xisbiga Jamhuuriga ee u taagan inuu baddalo madaxweynaha haatan talada haya ee Mr Obama.
Guusha Trump ee Florida ayaa waxaa ay ka dhigan tahay tallaabo weyn ee uu qaaday si uu u hanto Booska Haatan uu u halgamayo ayadoo ninka la tartamaya Marco Rubio uu u qiray in Mr Trump uu guulaystay waxa uuna joojiyey dhammaan ololihii uu ugu jiray murashax nimadiisa iyadoo wali codad tirintu ay socato oo aysan jirin cid loo xaqiijiyey Guusha.
Florida waxaa ay ka mid tahay Gobollada ugu waaweyn dalka maraykanka kuwaasoo shacbiga ku nool ay dooranayaan murashaxa u matali doona Aqalka cad doorashada Bisha November ee nagu soo fool leh ka dhici doonta dalkaas maraykanka , murashaxiintuna ay u tartamayaan inay helaan Codka gobolkaas.
Dhanka kale murashaxadda u loollamaysa inay noqoto murashaxa xisbiga Dimuqraadigaa u tartami doona Doorashada November Hillary Clinton ayaa Ayana Guulo Waaweyn ka gaartay Gobollada Florida , North Carolina iyo Ohio waxayna Taageerayaasheeda u sheegtay inay noqon doonto Murashaxadda Xisbiga Dimuqraadiga.
Puntland oo ka Hadashay qabsashada Puntland qaybo ka mid ah Alshababa
War deg deg ah.:-Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa saxaafada la hadlay wuxuuna sheegay inay ka war hayaan howlgalada Al-Shabab ka wadaan dhulka xeebaha leh ee Mudug iyo Nugaal.
Qarjab waxa uu sheegay inaysan ka marnayn gacanta Dowladda dhexe weerarka Al-Shabab. Wuxuuna weerarkan la xiriiriyay diid-mada Puntland ee nidaamka 4.5.